China Cylindrical Roller Bearing mpanamboatra sy mpamatsy |Xinri
Ny bearings-roller cylindrical dia misy amin'ny endrika isan-karazany, andiany, variana ary habe.Ny fahasamihafana lehibe amin'ny famolavolana dia ny isan'ny andalana roller sy ny flanges anatiny / ivelany ary koa ny famolavolana sy ny fitaovana.
Ny bearings dia afaka miatrika ny fanambin'ny fampiharana atrehan'ny enta-mavesatra radial sy ny hafainganam-pandeha ambony.Mametraka fifindran'ny axial (afa-tsy ny bearings misy flanges eo amin'ny peratra anatiny sy ivelany), dia manome stiffness avo, friction ambany ary fiainana maharitra.
Ny bearings-roller cylindrical dia misy amin'ny endrika voaisy tombo-kase na mizara.Amin'ny bearings voaisy tombo-kase,ny rollers dia voaaro amin'ny loto, ny rano sy ny vovoka, raha manome ny lubricant fitehirizana sy ny loto fanilikilihana.Izany dia manome friction ambany sy ny fiainana fanompoana ela kokoa.Ny fizarazarana bearings dia natao voalohany indrindra ho an'ny firafitry ny fitondrana izay sarotra idirana, toy ny crank shaft, izay manamora ny fikojakojana sy ny fanoloana.
Structural sy Features
Ny hazakazaka sy ny vatana mihodinkodina amin'ny fitondra-roller cylindrical dia manana endrika geometrika.Aorian'ny famolavolana nohatsaraina dia avo kokoa ny fahafaha-mitondra.Ny famolavolana rafitra vaovao amin'ny tavan'ny faran'ny-roller sy ny tavan'ny faran'ny-roller dia tsy vitan'ny manatsara ny fahaiza-mitondra axial mitondra, fa manatsara ihany koa ny toe-pahasalaman'ny tavan'ny faran'ny-roller sy ny faritra mifandray amin'ny tavan'ny faran'ny-roller sy ny tavan'ny-roller, ary manatsara ny fiasan'ny bearing.
● Henjana be
● Fifandirana kely
Afa-tsy ny bearings misy flanges eo amin'ny peratra anatiny sy ivelany.
● Ny famolavolana flange misokatra
Miaraka amin'ny famolavolana faran'ny-roller sy ny famaranana ny etỳ ambonin'ny tany, hampiroborobo ny fiforonan'ny sarimihetsika lubricant ka mahatonga ny friction ambany kokoa sy ny fahaiza-mitondra entana axial ambony kokoa.
● fiainana lava be
Ny profil-roller logarithmic dia mampihena ny fihenjanana amin'ny sisiny amin'ny fifandraisana amin'ny roller/raceway ary ny fahatsapan-tena amin'ny tsy fitoviana sy ny fivilian'ny shaft.
● Nitombo ny fahatokisana amin'ny asa
Ny fiafaran'ny surface eo amin'ny tampon'ny fifandraisana amin'ny rollers sy raceways dia manohana ny fananganana sarimihetsika hydrodynamic lubricant.
● Azo sarahina sy azo ovaina
Ny singa misaraka amin'ny XRL cylindrical roller bearings dia azo ovaina.Manamora ny fametrahana sy ny fampidinana izany, ary koa ny fanaraha-maso fikojakojana.
Ampiasaina betsaka amin'ny motera lehibe sy antonony, locomotives, spindles amin'ny milina, motera fandoroana anatiny, generator, turbine entona, boaty, milina mihodinkodina, efijery mihetsiketsika, ary milina fanandratana sy fitaterana.
teo aloha: Fanjaitra Roller Bearings
Manaraka: Bearings boribory boribory